विप्लवमाथि प्रतिवन्ध किन ? प्रधानमन्त्रीले भने– प्रचण्ड र मलाई मार्न मान्छे खटाइयो ! – sagunkhabar.com
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रचण्ड र आफूलाई मार्न मान्छे खटाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबीलगत्तै मंगलबार क्याबिनेटले सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी स्रोतले प्रचण्ड र ओलीको हत्या गर्ने षण्डन्त्र भएको दाबी गरे पनि पछिल्लो समयमा विप्लव समूहमा ठूला नेता पक्राउ परेका छैनन्। यसअघि पक्राउ परेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डका साथबाट चन्दा संकलनको सूची फेला परेको थियो । तर, यो निकै पहिलेको घटना हो ।
यसैवीच सरकारले तीनवटा प्रदेश स्तरमा सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीहरु आयोजना गरेको थियो । ती बैठकहरुमा सबै तहका सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु सहभागी थिए। र, त्यहाँ विप्लव माओवादीले पुर्‍याइरहेको सुरक्षा चुनौतीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
४० काटेपनि कुमारी नै बसेका यी सबैभन्दा सुन्दरी ५ अभिनेत्री
‘प्ले ब्वाई’ रणवीरको ब्रेकअपको भित्री कथा